Saldhiga booliska ee Garoowe oo maanta xarigga laga jaray mashruuca lagu ballaarinayo (Dhegeyso) – Radio Daljir
Seteembar 3, 2013 3:56 b 0
Garoowe, September 3, 2013 – Wasiirka maaliyada ee Puntland Faarax Cali shire ayaa maanta dhagax-dhigay ballaarin iyo dayactir lagu samaynayo saldhiga dhexe ee magaalada Garoowe, iyadoo munaasabadii dhagax-dhiga ay ka qeyb-galeen masuuliyiin ka tirsan hay?adaha amaanka iyo golaha xukuumada ee Puntland.
Wasiirka maaliyadda faarax cali shire oo dhagaxdhigga kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in hir-gelinta mashruucaan in mudo ah soo socday si loo helo dhqaale lagu fuliyo, wasiirka yaa intaas ku daray in lacagta ku baxaysa balaarinta iyo dhismaha saldiga Garoowe ay bixisay hay?ada UNDP.
Taliyaha guud ee ciidanka booliska Puntland Gen. Maxamed siciid Jaqanaf ayaa isna sheegay, in sidoo kale howlo dayactir iyo balaarin isugu jira laga samaynayo waqtiga dhow, qaar kamid ah saldhigyada booliska gaar ahaan Galkacayo, Eyl iyo Bayla oo howlahoodii meel fiican marayaan.
Wasiir dowlaha amniga ee Puntland Cabdulaahi Jaamac Cali oo isna halkaas hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in hawshani ay tahay mid baaxad weyn, taas oo lagu doonayo in dayactir balaaran lagu sameeyo dhamaan xarumaha iyo rugaha booliska si loo tayeeyo howlaha ciidanka booliska, taasina ay qayb ka tahay siyaasada dowlada.
DHEGEYSO: Weriye Jamaal Faarax Aadan oo war-bixin ka diyaariyey